IINGCAMANGO EZINGAMA-30 ZANGAPHANDLE ZOMLILO (IMIFANEKISO YOYILO) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Iingcamango ezingama-30 zangaphandle zomlilo (Imifanekiso yoyilo)
Iingcamango ezingama-30 zangaphandle zomlilo (Imifanekiso yoyilo)
Umgodi womlilo ongaphandle unokuba yindlela efanelekileyo yokuzisa uvuyo, ukufudumala kunye nomoya kwindlu yakho yangasemva, emgangathweni okanye kwindawo yepati. Ukuhlala emlilweni kunye nosapho kunye nabahlobo kunokuba yinto eyonwabisayo kwaye kongeze kwisibheno esipheleleyo sendlu yakho yangasemva. Apha ngezantsi kukho iingcinga ezahlukeneyo zomngxunya womlilo ongaphandle onokuzisebenzisa ukukhuthaza ukwenza iyadi okanye ipatio oya kuyonwabela ebusuku. Uninzi lwezi zoyilo zemingxunya yomlilo zingakhiwa ekhaya okanye ziyafumaneka kwintengiso yentengiso.
Nazi ezimbalwa zemingxunya yomlilo efanelekileyo ngoku enikelwayo:
Umgodi womlilo wegesi - Ezi ntlobo zenza kube lula ukufumana ubume bomlilo ngaphandle ngaphandle kokukhathazeka ngokukhanyisa umlilo, iinkuni, okanye ukucoca iimfumba zomthi. Ngokuqhelekileyo zibaleka ipropane engamanzi okanye igesi yendalo.
Indawo yomlilo yangaphandle - Ezi ziindawo ezime nkqo ezibonakala zifana nelitye lesiko okanye indawo evutha umlilo efumaneka ekhayeni lakho. Ziyakwazi ukuphatheka, okanye zilungiswe ngokusisigxina. Kukho ukhetho oluthandwayo kwaye unokubaleka iinkuni, okanye igesi yendalo kuxhomekeke kukhetho lwakho.
Itafile yomgodi womlilo - Ezi tafile zangaphandle zihlala zixande kwaye zinomngxuma womlilo oqhuba ubude betafile ngerimu ejikeleze imiphetho. Banokongeza ubuqaqawuli besitayile kwindawo engaphandle kwaye bahlala basetyenziswa kwivenkile yokutyela, okanye kumabala ehotele.
Umlilo ovuthayo -Ukuyila ngokukodwa ukupheka umngxunya womlilo olu hlobo lune-grill enkulu yegrill ebekwe ngaphezulu kweenkuni zokubasa. Bahlala beza bexhotyiswe ngesixhobo sokujikeleza ukugoba inyama ngaphezulu komlilo onzima ukuze badle isidlo esikhulu.
Phosa umngxuma womlilo wentsimbi - Isinyithi yentsimbi lukhetho oluthandwayo kwimingxunya yomlilo yangaphandle njengakwizixhobo ezingabizi kakhulu ezihlala ixesha elide kwaye zomelele.
Umgodi womlilo wobhedu -Copper yinto ebambelela kakuhle kwimingxunya yomlilo kunye nombala wayo onomtsalane uyenza ukuba ibe lukhetho olunomtsalane. Zomelele kakhulu kwaye ziza ngobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile.
Sojoe umgodi womlilo - Olu luphawu oluthandwayo lwemingxunya yomlilo ephathekayo ethandwa kakhulu. zenziwe ngentsimbi eshinyeneyo kwaye zihlala zinemilo eyahlukeneyo kunye nezitayile kubandakanya uyilo olunjengeenkwenkwezi, iinyanga, kunye nezilwanyana zasendle. Ngokuqinisekileyo, ngakumbi kwisiphelo sepremiyamu, kodwa ukhetho oludumileyo phakathi kwabanini bamakhaya.
IChiminea -Umngxuma womlilo ongaphandle uvaleleke ngaphakathi itshimini ende. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezixhobo. Kukho isitayile seSpain esenziwe nge-terra cotta.
Umlilo oqhelekileyo -Imingxunya yomlilo eyilelwe ngobuchule inokuyilwa ngononophelo ukuze ithelekise umxholo kunye nesimbo sekhaya lakho. Banokubaleka ukusuka kwixabiso eliphantsi ukuya kubuxabiso. Iikontraki ezininzi zalapha ekhaya zinokukwenza olu hlobo lomsebenzi ukuze zikufumane kanye kanye le nto uyifunayo.
Izitena / ilitye lomlilo -Ezi ntlobo zezitena okanye iiprojekthi zomlilo wamatye zihlala zigqitywa ngabanini bamakhaya abafuna ukwenza isiko ngokwabo. Ngokulandela izicwangciso zomlilo ezikhoyo umntu unokwenza indawo efanelekileyo yokubuyela umva efanelekileyo eyenzelwe ukoyisa ngaphandle okanye ukubeka iinyawo phezulu ukuze ziphumle.
Ixabiso lomlilo eliphantsi -Imingxunya yomlilo eyenziweyo ekhaya inokuyilwa ngokusebenzisa ilitye, izitena, ibhlokhi yentsimbi okanye ezinye izinto ezibambe kakuhle kwindalo esingqongileyo. Eyona ndlela ilula yokwenza oku-kukuzimela ngokwakho kukumba uxinzelelo emhlabeni olunomhlaba ongatshiyo, okanye igrabile kwaye wenze isangqa samatye ukuze ubambe umlilo. Imisesane engabizi mali ingalula kwaye ingabizi yenza kwaye ube mkhulu, okanye umncinci njengoko ufuna.
Le patio yamatye enesangqa enomngxunya womlilo oyisetyhula yenza indawo yokumema i-hangout kunye nokunxibelelana nabahlobo kunye nosapho. Bona Okuninzi Uyilo lwepatio yangasemva Apha.
Uyilo lomngxunya woMlilo
Kuba isetyhula ngohlobo, abantu abahleli ngasemngxunyeni womlilo kunokwenzeka ukuba baqale incoko. Ubuncwane obunqamlekileyo okanye umgca unika indawo yokubeka izinto okanye iinyawo zakho ukuze uphumule. Umngxuma womlilo oboniswe ngentla apha wenziwe ngamatye nesamente kwaye usebenzisa iinkuni zokubasa, kwaye ngumzekelo weklasikhi womlilo wamatye.
Olu hlobo lokumema lwasemva luqukethe kuvulandi wegrabile Indawo yokuhlala enamatye amakhulu kunye nomngxuma womlilo wobhedu. Iiplanga zomthi ezingcwatyelwe emhlabeni ngokuyinxenye zibonelela ngendledlana evuyisayo eya kwindibano.
Itafile yomgodi womlilo oyisetyhula yongeza isitayile kule poranda. Ngomgodi womlilo embindini wetafile, ishiya yonke enye itafile isimahla ukuba uyisebenzise. Itafile ephezulu yenziwe ngeethayile, eyenza kube lula ukuyicoca. Iinyawo zetafile zithatha ubume besiseko kwaye zenziwe ngentsimbi. Le yenye yezona zimvo zilula zangaphandle zomngxunya womlilo zokuphumeza njengoko olu luyilo luphathekayo kwaye lunokubekwa naphi na apho ufuna khona.
Unokukhetha ukuba ungathanda ukuma okanye uhlale ecaleni kolu hlobo kuvulandi wegrabile umlilo. Kuhle kumcimbi omkhulu okanye kubudlelane. Umngxuma womlilo uphakathi koxinzelelo lomhlaba embindini kwaye usebenzisa isetyhula yothango lwentsimbi ngaphakathi ukubamba iinkuni kwaye ubambe umlilo ngaphakathi kwiziko ngaphandle kokuchukumisa imiphetho. Igravel isetyenziselwa ukwenza ifom yesetyhula ngelixa amatye asetyenziselwa ukuchaza imiphetho engaphandle nengaphakathi, kwaye iipaneli zomthi zisetyenziselwa ukwenza ukwahlula ngaphakathi kwesangqa. Iipaneli zeenkuni zikwasetyenziselwa ukugxila kumngxunya womlilo embindini.
Uyilo lomngxunya womlilo luyafana nolu lungentla olunombono owahlukileyo. Umahluko kuphela kukuba eyangaphambili ikufutshane nendlu yelog ngaloo inika ukuba indlu ijolise ngokwaneleyo. Nangona kunjalo, lo mngxunya womlilo ubekiwe ukuze ukonwabele ubuhle bendalo kunye nobushushu bomlilo.
Lo mgodi womlilo unomzimba ongqukuva owenziwe ngentsimbi kunye nemilenze yentsimbi eyenziwe ngesitayile. Umzimba uvulekile embindini kodwa ugqunywe ngescreen sentsimbi ukuze ukwazi ukubona nokubona ubushushu bomlilo. Lo mngxuma usebenzisa iinkuni zokubasa. Umzekelo we-chiminea, lo mgodi womlilo ubonakalisa i-chimney yentsimbi ephezulu. Umsebenzi wetshimini kukukhokelela kumsi kwaye hayi ebantwini abahleli ecaleni.
Umzimba walo mngxuma womlilo uyafana nesitya, esibanjwa yimilenze yentsimbi ngesiseko setyhula. Umzimba wenziwe ngobhedu kwaye ugqunywe ngescreen sensimbi. Umsebenzi wesikrini kukugcina uthuthu kunye nokufaka ngaphakathi emngxunyeni.
Yenziwe ngamatye, lo mgodi womlilo ongaphandle uyindlela entle yokonwabela ubuhle becala lelizwe. Lo mngxuma womlilo oyisetyhula unomngxuma kwelinye icala ukuze ungene kwaye utshintshe okanye ungeze iinkuni kwaye ukwazi ukucoca uthuthu. Inomphetho otyebileyo wokubeka izinto, ukutya, neenkuni zokubasa okanye ubeke iinyawo zakho. Olu hlobo lwesakhiwo sangaphandle kunokuba yindlela engabizi kakhulu yokuguqula indawo yakho yokuhlala uye kuyo yonke intsapho yakho eya kuyonwabela iminyaka ezayo.
Enye yeengcinga zethu ezilula zomngxunya womlilo zangaphandle ziyafana nokujonga equleni. Umgodi womlilo wenziwe ngezitena zekhonkrithi kwaye unamatye ajikelezileyo ukugxininisa kunye nesitayile esongezelelweyo soyilo. Umngxuma uzaliswa kukungcola ze iinkuni zokubasa zihlale phezu kwalo mhlaba. lo ikwangumzekelo womngxuma womlilo wexabiso eliphantsi onokwakhiwa ngokukhawuleza ngaphandle kwamava.
Oku iperola yomlilo itafile yexesha langoku kuyilo ukuze incedise ngaphakathi. Nangona kunjalo ingaphakathi lisebenzisa izinto zendalo ke itafile ikwasebenzisa izinto zendalo, ezililitye okanye isileyiti. Umngxuma uhamba phakathi kwetafile kwaye unokusebenzisa irhasi yendalo njengamafutha.
Umzekelo wenkuni evuthayo. I-grill yenziwe ngentsimbi kwaye ibanjwe ngamatyathanga kunye ne-pulley ekuvumela ukuba uhlengahlengise umgama phakathi kwe-grill kunye nomlilo. Umlilo womlilo ujikeleze kwifom kwaye unamatye achaza umjikelezo. Olu luyilo lunokuba neenkuni zokubasa kuphela.
Lo ngumzekelo womgodi womlilo wobhedu. Uyilo lomzimba luphinde lufane nolwesitya sokuhlambela. Nangona kunjalo, olu luyilo lusebenzisa i-rack emazantsi omzimba ukubamba iinkuni ngelixa uthuthu luyehla emgqeni. Ukucoca umngxuma womlilo kufuneka uphakamise iraki ukuze ukwazi ukuthatha uthuthu oluqokelelwe phantsi komqolo. I-rack ibamba naziphi na iinkuni ezinkulu ukuze ukwazi ukuzisebenzisa kwakhona kwixa elizayo kwaye ugcine ixesha ekuhleleni uthuthu kunye nomthi oshiyekileyo. Ibhentshi enomdla egoso eyenziwe kumthi omncinci wokhuni eludongeni lwamatye yenza indawo enkulu yokuhlala kwaye uphumle.
Lo mgodi womlilo wangaphandle wenziwe ngamatye kunye noxande kwifom. Isebenzisa iinkuni zokubasa. Isiseko senziwe ngamatye eemilo ezahlukeneyo, umbala kunye nobukhulu, ngelixa umphezulu wenziwe ngamatye aqingqiweyo amhlophe. Ukuzalisa uyilo lomhadi yibhentshi eyenziwe yoyilo olufanayo olubekwe kwikona.
Le tafile yomlilo yesikwere kunye nemilenze yentsimbi. Umbhobho womlilo uphakathi kwaye uphumle kancinci etafileni. Emva koko igqunywe ngescreen sesinyithi ukuthintela ukuphuma kuphume kumhlaba oshiyekileyo. Itafile ephezulu yenzelwe iithayile zesikwere ukulungiselela ukugcinwa ngokulula. Bona imifanekiso engaphezulu Uyilo lomgangatho weengcinga kwiphepha lethu legalari.
Umbhobho womlilo ongabizi kakhulu usebenzisa amatye aqingqiweyo abekwa ngaphezulu komnye nomnye enze imilo eyindlili. Iziko emva koko lizaliswe kukungcola okungatshiyo emva koko iinkuni zifakwa ngaphezulu. Lo mgodi womlilo uya kuba mkhulu kwizithuba ezinoyilo lwendalo njengegadi okanye iiyadi ezingasemva. Izitulo zeAdirondack zenza kube lula ukuhlala phantsi kwaye ukhabe iinyawo zakho.
Ixesha langoku lithatha uyilo lomngxunya womlilo. Lo mngxunya unepleyiti enkulu ejikelezayo njengomphezulu wawo kunye neziko elihlelweyo. Iinkuni zibekwa embindini. Umphezulu ubanjwe ngohlobo lwe-cylindrical esebenza njengomzimba kunye nemilenze. Ilungile ekubhaleni iindawo ezingaphandle.
iingoma zokudlala kwimisitho yomtshato
Yenziwe ngamatye kunye namatye enza isilinda. Amatye asetyenziswa njengomzimba kwaye amatye asikiweyo asetyenziswa njengeemiphetho okanye irim yomphezulu osicaba. Iziko ligcwaliswa ngamatye okanye amatye apho kunokubekwa khona iinkuni. Olu hlobo lwemingxunya yomlilo lusetyenziselwa ezona ndawo zingaphandle.
Umngxuma womlilo osetyenziselwa ukuxhasa okanye ukwanelisa uyilo lwakho lwendawo efanelekileyo. Lo mgodi womlilo usebenzisa amatye aqingqiweyo endalo abekwe kwisangqa ukubonisa indawo yomhadi. Ihlala isetyenziselwa kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezikumgangatho ophezulu kunye neekhondomu zokurenta ezi uyilo zongeza indawo yokuhombisa kwindawo engaphandle. Olu luyilo longeza ukongeza kwindalo yakho.
Sebenzisa amatye aqingqiweyo ukwenza isakhiwo esime kakuhle kuya kudala iindonga zomngxuma wakho. Zijikeleze lo mngxuma ngamatye aqingqiweyo aqingqiweyo asebenza njengezinyuko. Olu longezo olukhulu kwigadi yakho ukuba ungathanda igadi yendalo okanye uyilo lwasemva kwendlu. Olu luyilo alubizi ukwenza kwaye lunokongeza kulonwabo lwasemva kwendlu yakho.
Ezi tafile zomgodi womlilo zisebenzisa igesi yendalo njengamafutha. Umzimba wenziwe ngamatye enza isilinda emva koko wafakwa ngaphezulu kweglasi. Umngxuma womlilo uphakathi kwetafile okwangumjikelo okwimo kwaye uzaliswe ngamatye okanye amatye angatshiyo.
Khawufane ucinge xa ​​uhleli ujikeleze lo mngxuma womlilo ukonwabela umbono wechibi. Ungahlala engceni okanye uze nesihlalo sakho uphumle. Amatye asikiweyo adityaniswa ngokungacwangciswanga kwaye enza ifom ye-quadrilateral. Umphetho wenziwe ngamatye aqingqiweyo acocekileyo ukuze ubenendawo ethe tyaba kunye nokulingana. Umlilo uqulethwe ngokugqibeleleyo kwaye wenza ukukhanya kwexesha elinomtsalane ngaphezulu kwechibi.
Ukudakumba emhlabeni okufakwe izitena emaphethelweni. Isiseko soxinzelelo sikwanamatye ngokunjalo. Ungapheka okanye uphumle nje malunga naloo mlilo. Olu lolunye lweendlela ezilula ze iindawo zomlilo zangaphandle umntu unokwenza ngokulula eyadini yakhe yangasemva.
Lo mngxuma wenziwe ngezitena kwaye uzaliswe ngamatye okanye ukungcola embindini. Ngenxa yokuba ikwimo yamacala amane, kulula ukwenza uyilo olulinganayo lwendawo engasemva kwendlu ogqiba ukuyifaka emngxunyeni. Iipavile zamatye ezinengca ezibalekayo phakathi kwazo zibekwe kwipateni ejikeleze umhadi yongeza kumtsalane. Ungaqala umlilo ngokubeka iinkuni embindini kwaye uhlale phantsi uphumle ujikeleze ubushushu bomlilo.
Umngxuma womlilo ngaselwandle yindlela entle yokuphumla kunye nokuncokola nabanye abantu ngelixa unandipha umoya opholileyo wolwandle okanye isandi sokuphumla kwamaza. Umngxuma wenziwe ngezitena ezibekwe kwisangqa. Umzimba usebenzise izitena ezimhlophe ngelixa udini lusebenzisa izitena ezibomvu. Oku kuzisa ugxininiso kungqameko hayi umzimba okanye isiseko.
Umzekelo womgodi womlilo we-sojoe. Yenziwe ngentsimbi eshinyeneyo. Umzimba wenzelwe inyanga neenkwenkwezi, ikwanemilenze emithathu yeesilinda, kwaye erim yiringi engaphandle yetyhula esebenza njengesiphatho somhadi sokuhambisa ngokulula. Umzimba ugcwele iscreen ukuze uthuthu okanye i-ember ingabinakubaleka emngxunyeni ngamacala.
Oku kwahlukile uyilo lokuqubha ngokwesiko ifaka i-gas eyakhelwe-ngaphakathi emlilweni kunye namatye eglasi kunye nomda wamatye endalo. Imingxuma yomlilo yamachibi yenza iimpawu zamanzi ezinomdla ezonyusa imeko yasemva kwendlu ingakumbi ebusuku.
Lo mgodi womlilo ulungile kwiindawo zeenkampu. Umngxuma womlilo uboniswa ngamatye akwimo yesetyhula. Imida ke ithululelwa ngesamente okanye ngodaka ukuze igcinwe ngokudibeneyo kunye nokwenza umphezulu wokulinganisa ukuze ubeke izinto kuwo. Ngaphezulu komhadi kukho intonga yentsimbi enqamlezileyo enokusetyenziselwa ukuxhoma iipani okanye iigrill zokupheka.
Eminye yemibono yomlilo engaphandle elula kubandakanya ukusebenzisa amatye rhoqo acwangciswe kwisangqa kwindawo emiselweyo ngasemva kwendlu. Ukusebenzisa amatye ukubonisa indawo yomlilo kwindawo enengca, iziko ligcwele ukungcola okungatyekiyo kunye namatye. Oku kwenza indawo entle kwii-hangout zosapho kunye nokunxibelelana kwiyadi yangasemva. Olu hlobo lwemingxuma yomlilo ilungele izithuba zomsebenzi omkhulu ongaphandle.
Sebenzisa umahluko njengeyona nto iphambili yoyilo, isiseko senziwe ngamatye asikwe ngokungaqhelekanga ngelixa umda wenziwe ngamatye amile kakuhle. Kwakhona isiqingatha sombhobho wamanzi sikwikhonkrithi okanye amatye ngelixa esinye isiqingatha sisemanzini. Iziko limile okwe basin kwaye lenziwe ngamatye eengqalutye. Bona ngakumbi isiko Uyilo lweempawu zamanzi egadi Apha.
ukuba wenzeni unyaka omnye
iziqithi zasekhitshini ezithunyelwa ngenqanawa
ndifuna ukukwazi ndifuna ukubona ubuso bakho
iwasha kunye nesomisi ububanzi
uyenza njani iqhina
phezulu r kunye b iingoma zomtshato